UFLEETWOOD MAC: UPHONONONGO LWEALBHAMU YEFLEETWOOD MAC - IINDABA
Nangona bekukude ukuqala kwabo, i-albhamu ye-band ene-1975 yaziva njengesiqalo: ingxelo ye-pop-rock kunye nokudibana okungalindelekanga kwamacandelo amabini afanayo anikezela ngento entsha ngokwenene.
I-Fleetwood Mac ibikhona phantse iminyaka elishumi ngaphambi kokukhutshwa kwe I-Fleetwood Mac ngo-1975 kodwa hayi ngendlela ababezakuyiqonda ngayo abaphulaphuli bale mihla. Ibali lendlela uLindsey Buckingham noStevie Nicks abayitshintshe ngayo iBritish blues band ebotshelelwe ngumdubhi uMick Fleetwood kunye no-bassist uJohn McVie uphilile kwaye uhlala exelelwa amaxwebhu amaninzi, i-retrospectives, kunye nezinye izinto ezinje ngale CD-CD / single-DVD Super Deluxe Edition . Ukuphindaphinda kuyisongele le ndaba inomdla, inika iingozi ezonwabisayo njengomsebenzi wobuthixo, kodwa ngokongeza idiski enye yokuhamba kunye nediski yezinto eziphilayo, le Super Edition ye-Super Deluxe inceda ukwenza ukuba okuqhelekileyo kubonakale kutsha kwakhona.
Ukudinwa nangona kusenokwenzeka, eyandulela I-Fleetwood Mac kubalulekile ekuqondeni icwecwe kuba irekhodi likhona ekudibaneni kweerock'n'roll aesthetics ezimbini ezahlukileyo. Ngethuba lika-1975 lijikeleza, ii-Mac zazisinda. UMick noJohn-abahlali bebhendi ukusukela oko yaqalwa ukuza kuthi ga namhlanje-babenethamsanqa lokusebenza kunye neengqondi ezimbini ezinengxaki. UPeter Green wayelawula iirekhodi zokuqala kunye nezohlaza, ekugqibeleni wanikezela kwi-LSD kanye ngexesha lakhe iqela uJeremy Spencer elahla umculo kunqulo lwenkolo. Ukuhamba kwakungahlambulukanga, kodwa u-guitarist uDanny Kirwan wenza njenge-arhente yokubopha iqela de bamfumana uBob Welch, ilitye elinomtsalane obonakala ngathi wanelisekile kukuhlala kwindawo ye-amorous eyahlula i-AOR rock kunye ne-pop yabantu abadala. Ukuba konke oku kungenayo kwakungadideki ngokwaneleyo, iqela kwakufuneka lilwe umgwebi weFleetwood Mac Bahlanganiswe ngumphathi wabo wangaphambili.
Onke la magama aye abhalwa njengombhalo osemazantsi kwimbali yeFleetwood Mac ngenxa yokuba uMick Fleetwood wawela kwidemo evela kwimvumi / ababhali beengoma zeSoCal uLindsey Buckingham noStevie Nicks. Ukuba umvelisi uKeith Olsen, owanceda i-albhamu ka-Buckingham Nicks eyayibizwa ngokuba yi-1973, akazange adlale uMick ngeteyiphu, amathuba okuba uFleetwood Mac alungele ukuqesha enye ikatala ye-hotshot. Endaweni yoko, uFleetwood wonzakala ekufumaneni into aza kuyibiza kamva kwiBuckingham Nicks, isibini esiliqela lomculo onomculo owabelwana ngokungafaniyo kwii-albhamu zeFleetwood Mac ezenziwe ngaphambi kowe-1975. Unxibelelwano olunye lomculo phakathi kwala maqela mabini yayilulwimi kaChristine McVie, umbhali-wengoma owayedlala ipiyano kunye neblues combo Chicken Shack ngaphambi komtshato wakhe noJohn. Nje ukuba babe ngumtshakazi nomyeni, uChristine wajoyina ngokusesikweni eli qela ngo-1971, esenza igalelo elincomekayo nelithambileyo kwilitye elinendawo enamatye aseKirwan naseWelch.
Nangona kunjalo, kwakungekho mfanekiso ucacileyo kwiFleetwood Mac discography kubantu abaphuphayo baseNick kunye ne-barbed pop egqibeleleyo yaseBuckingham, izandi ezazingaMerika ngokucacileyo njengee-blues jams ze-Fleetwood Mac zase-Bhritane. I-Buckingham Nicks ikwangamaxhoba okusinda kwilimbo lomculo kwi-West Coast, kodwa ayengengawo amaqhinga xa babesamkela isicelo sikaFleetwood sokujoyina iFleetwood Mac: babedlala umdlalo ofanayo okwexesha elinye njengeMac, kuphela kwiligi eyahlukileyo . Yiyo loo nto icwecwe lowe-1975 labizwa I-Fleetwood Mac -Licwecwe lesibini leqela eliza kuthiywa ngegama leqela; Ngokwamanqaku e-liner kaDavid Wild kwi-Super Super Deluxe Edition ka-2018, abalandeli kuyacaca ukuba bayayicalula kulowo ubengaphambi kwayo ngokuyibiza ngokuba yiWhite Album kodwa kunzima ukucinga ukuba baninzi abaphulaphuli abazikhathaza ngolwahluko olunje-luziva ngathi lityala: indlela engalindelekanga yamacandelo amabini ahambelanayo anika into entsha ngokwenene.
Ukumamela I-Fleetwood Mac ngoku, amashumi eminyaka emva kokuba lijike iqela laba zii-superstars, isabonakala ngathi intsha, ngokungafaniyo nabanye oontanga bayo be-1975, kwaye konke oko kungenxa yendlela iqela elidibanise ngayo ii-aesthetics ezimbini. UFleetwood Mac, ngakumbi kwiminyaka elandelayo yokuhamba kukaPeter Green, yayiyinto yeqela lemood, ukufezekisa ubumdaka, ubungakanani bendawo obuswele inkcazo. I-Buckingham Nicks yayingabalingani babo, bengagxili nje kukuchaneka kweengoma kodwa kunye neemveliso: i-albhamu yabo ka-1973 ibamba iinguqulelo ezisencinci zabaculi / ababhali beengoma, apho ubumnandi bukaNick bulinganiswa kukugqibelela kwendoda kaBuckingham.
UBuckingham wazama ukwenza uFleetwood Mac ukuba amatshe aye kwisingqi sakhe — ilivo lakhe lalizama ukuxelela uJohn ukuba angadlala njani indima ade umntu ophantsi kwebassist abeke isando phantsi, exelela uBuckingham ukuba eli qela labizwa ngegama lakhe — kodwa wazinza ukulalanisa, ukunceda uNick kunye noChristine ekwenzeni nzulu iingoma zabo, ngelixa ibhendi yakhe yanika umphefumlo kunye nokomelela kwiingoma zakhe ezinamanxeba. Unxibelelwano olunje sisibheno se I-Fleetwood Mac , ngokuyinxenye ngenxa yokuba iqokelelwe kwimibono emininzi eshiyekileyo ukusuka kwiminyaka yama-60s: hippie mysticism, pop practicalism, R & B grooves, and rock rock all molded into the music that is same time professional, personal, commercial, and eccentric.
Ngokufumba kwezinye izinto ezithathayo, ukuhlela okukodwa, kunye nezinto eziphilayo, uHlelo lweSuper Deluxe lubonisa indlela uFleetwood Mac asebenze ngayo ukufezekisa le fusion. Mhlawumbi iinguqulelo zokuqala zinzima, kodwa baziva be-kinetic kuba ibhendi icinga ukuba babengoobani. Eyona nto ingcono zizinto eziphilayo, apho ibhendi ihamba umgama phakathi kweengcambu zeblues zokuqala kunye nepop esandula kufunyanwa. Ngenxa yokuba edlala ikatala kwaye ecula, iBuckingham ivusa umoya, kodwa into emnandi malunga nezi nguqulelo ze-Oh Well kunye ne-Green Manalishi (enesithsaba esinePraded) kukuba zii-blues tunes eziphambi komculi onemikhwa emtyhala icala elichaseneyo le-blues, elinika le midlalo amandla amnandi.
Nokuba izinto zebhonasi zixabisekile, umculo ohleli ungummangaliso yi-albhamu efanelekileyo. Mhlawumbi imvelaphi yayo ikukutya okuseleyo-uninzi lweengoma ekuqaleni lwalucetyelwe icwecwe lesibini leBuckingham Nicks, iCrystal ivuselelwe kwasekuqaleni, amandla ombane oqaqambileyo weBlue Letter athathwe kwiiCurtis Brothers ezingafakwanga. I-Fleetwood Mac iziva imanyene kuba eli cwecwe licwecwe lokudibana. Yonke into yealbham inezinto ezingenamda, uninzi lwazo lunokufumaneka kwiRhiannon ethandwayo yeNick, yiyo loo nto I-Fleetwood Mac Kubonakala ngathi kuyonwabisa kwaye kuyonwabisa ixesha elide emva kokuba kufakwe kulwazi lwethu ngokudibeneyo.
ujanet jackson ukhenketho urhoxisiwe ngo-2016
Injongo yam iyinyani
ingaba ucinga lento ndiyicingayo
usweleke njani u-ariel camacho
Iialbham zerap zika-2018
nipsey hussle umngcwabo bukhoma